၂၀၁၈ ဇွန်လမှာပေါက်နေတဲ့ အကောင်းဆုံး နိုင်ငံတကာ သီချင်း (၁၀) ပုဒ်
၂၀၁၈ ဇွန်လမှာ ပေါက်နေတဲ့ အကောင်းဆုံး နိုင်ငံတကာ သီချင်း (၁၀) ပုဒ်
9 Jun 2018 . 2:38 PM
ဒီလိုနေ့ဟာ သာယာသော ပိတ်ရက်လေးဆိုတော့ အားလုံးပဲ အပြင်သွားစရာရှိတာသွား၊ မရှိတဲ့သူကလည်း အိမ်မှာပဲ သီချင်းလေးနားထောင်လိုက်၊ အခွေလေးကြည့်လိုက်လုပ်နေကြမှာပါပဲ။ ဒီလို လူတွေထဲကမှ ဂီတကို ရွေးချယ်တဲ့သူတွေအတွက် အသစ်စက်စက် နိုင်ငံတာကာသီချင်းကောင်းလေးတွေကို ညွှန်းချင်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းတွေဟာ ထွက်ရှိတာ သိပ်မကြာသေးဘဲ YouTube မှာလည်း Hit ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းလေးတွေမို့ နားဆင်ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။
ဒီသီချင်းကတော့ Maroon5ရဲ့ ဆဌမမြောက် Album ဖြစ်တဲ့ Red Pill Blues ထဲက သီချင်းဖြစ်ပြီး Cardi B က Rap အပိုဒ်ကို ပါဝင်ရေးသားသီဆိုထားပါတယ်။ “မင်းလို မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို လိုအပ်တယ်” ဆိုတာကို Melody ပြေပြေပြစ်ပြစ်နဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး ဖွဲ့ပြထားပြီး နားစွဲလွယ်စေပါတယ်။ သီချင်းထက် Music Video က ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပြီး Gal Gadot ၊ Jennifer Lopez ၊ Camila Cabello တို့ကအစ Ellen DeGeneres အဆုံး နာမည်ကျော်အမျိုးသမီးတွေ အများကြီးပါဝင်ထားပါတယ်။
Back to You သီချင်းကတော့ သိပြီးကြတဲ့ အတိုင်း 13 Reasons Why Season2ရဲ့ Soundtrack ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအတော်များများရဲ့ Top 20 စာရင်းထဲ ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ US မှာလည်း Billboard Hot 100 ထဲ ဝင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ “You could break my heart in two
But when it heals, it beats for you” ဆိုတဲ့ လှပတဲ့ စာသားနဲ့ I’d go back to you ဆိုတဲ့ အဖွဲ့လေးကို ကြိုက်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ Music Video ကို ခပ်ဆန်းဆန်းလေးရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီး ၁၉၆၅ ခုနှစ်က ပြင်သစ်ရုပ်ရှင် ‘Pierrot le Fou’ ကနေ Inspiration ရယူထားတယ်လို့ ဆိုတာမို့ ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Girls – Rita Ora ft. Cardi B ၊ Bebe Rexha & Charli XCX
ဒီသီချင်းကတော့ Rita Ora ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိမယ့် ဒုတိယမြောက် Album ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို ရေးသားသူတွေထဲမှာ Camila Cabello လည်း ပါဝင်ပြီး ဒီသီချင်းဟာ Charli XCX ရဲ့ သီချင်း ‘Boys’ ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲသီချင်းလို့ ယူဆလို့ ရပါတယ်။ သီချင်းစာသားတွေအရ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုနဲ့ လိင်တူလိင်ကွဲ နှစ်မျိုးလုံး နှစ်သက်သဘောကျမှုကို ဖော်ကျူးနေပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုနာမည်ကြီး အမျိုးသမီးလေးယောက်ရဲ့ သီချင်းကို နားထောင်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာပါ။
Solo ကတော့ ထူးထူးခြားခြား Clean Bandit နဲ့ Demi Lovato တို့ တွဲဆိုထားတဲ့ သီချင်း ဖြစ်ပါတယ်။ EDM နွယ်တဲ့ သီချင်းအမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး အသည်းကွဲနေတာတောင်မှ ကိုယ့်ဘာသာရုန်းကန်ရပ်တည်နေတဲ့အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Sudamericana – Andra ft. Pachanga
ဒီသီချင်းကတော့ လက်တင်အမေရိကပုံစံသီချင်းဖြစ်ပြီး ရိုမေးနီးယားအဆိုတော် Andra က Pachanga နဲ့ တွဲပြီး သီဆိုထားပါတယ်။ ဒီလို သီချင်းပုံစံတွေ ကြိုက်တဲ့သူတွေ အတွက် ဒွန့်လို့ ရအောင် ကြည့်လိုက်ပါဦး။
ဒီသီချင်းကတော့ အမေရိကန်အဆိုတော် Bazzi ရဲ့ သီချင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်မလေး ဘယ်လောက်မိုက်ကြောင်းကို ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ဒီသီချင်းလေးကိုလည်း မြည်းစမ်းကြည့်ပါဦး။
Start again – OneRepublic ft. Logic
OneRepublic ရဲ့ သီချင်းသစ်ဟာ နံပါတ် (၇) နေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး 13 Reasons Why Season2ရဲ့ Soundtrack လည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ချက်လောက် ကြည့်လိုက်ပါဦး။
Lil Pump ရဲ့ ဒီသီချင်းကတော့ သူရဲ့ နောက်ထွက်ရှိလာမယ့် Mixtape ‘Harvard Dropout’ ထဲက သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းစာသားတွေကတော့ Rapper တွေ ဆိုနေကြ ပုံစံမျိုးပဲ ဖြစ်ပြီး ငွေအပြည့်သယ်ထားတဲ့ Truck Car နဲ့ Bling Bling တွေနဲ့ ရိုက်ပြထားပါတယ်။
အခုတလော ရေလည်တွေ ပွင့်ပြနေတဲ့ Troye Sivan လေးရဲ့ ‘Bloom’ ဖြစ်ပါတယ်။ I bloom just for you ဆိုတဲ့ စာသားတင် ပြုံးချင်စရာပါ။ ဒီသီချင်းဟာ သူ့ရဲ့ ထွက်ရှိမယ့် ဒုတိယအခွေမှာ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး Troye Sivan တစ်ယောက်ရေလည်နုပြတဲ့ သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။
Don’t say you love me ကတော့ နားစွဲလွယ်ပြီး တကယ်မချစ်ပဲနဲ့ ချစ်တယ်မပြောပါနဲ့ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။ Fifth Harmony ရဲ့ တတိယအခွေထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး Pop နဲ့ Tropical House အမျိုးအစားသီချင်းလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဆင်ပြေနားစွဲနိုင်တဲ့ သီချင်းများကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားလို့ ခံစားပျော်ရွှင်နိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ Haveanice weekend!
၂၀၁၈ ဇှနျလမှာပေါကျနတေဲ့ အကောငျးဆုံး နိုငျငံတကာ သီခငျြး (၁၀) ပုဒျ
ဒီလိုနဟေ့ာ သာယာသော ပိတျရကျလေးဆိုတော့ အားလုံးပဲ အပွငျသှားစရာရှိတာသှား၊ မရှိတဲ့သူကလညျး အိမျမှာပဲ သီခငျြးလေးနားထောငျလိုကျ၊ အခှလေေးကွညျ့လိုကျလုပျနကွေမှာပါပဲ။ ဒီလို လူတှထေဲကမှ ဂီတကို ရှေးခယျြတဲ့သူတှအေတှကျ အသဈစကျစကျ နိုငျငံတာကာသီခငျြးကောငျးလေးတှကေို ညှနျးခငျြပါတယျ။ ဒီသီခငျြးတှဟော ထှကျရှိတာ သိပျမကွာသေးဘဲ YouTube မှာလညျး Hit ဖွဈနတေဲ့ သီခငျြးလေးတှမေို့ နားဆငျကွညျ့လိုကျကွပါဦး။
ဒီသီခငျြးကတော့ Maroon5ရဲ့ ဆဌမမွောကျ Album ဖွဈတဲ့ Red Pill Blues ထဲက သီခငျြးဖွဈပွီး Cardi B က Rap အပိုဒျကို ပါဝငျရေးသားသီဆိုထားပါတယျ။ “မငျးလို မိနျးကလေးတဈယောကျကို လိုအပျတယျ” ဆိုတာကို Melody ပွပွေပွေဈပွဈနဲ့ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးလေး ဖှဲ့ပွထားပွီး နားစှဲလှယျစပေါတယျ။ သီခငျြးထကျ Music Video က ပိုစိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးပွီး Gal Gadot ၊ Jennifer Lopez ၊ Camila Cabello တို့ကအစ Ellen DeGeneres အဆုံး နာမညျကြျောအမြိုးသမီးတှေ အမြားကွီးပါဝငျထားပါတယျ။
Back to You သီခငျြးကတော့ သိပွီးကွတဲ့ အတိုငျး 13 Reasons Why Season2ရဲ့ Soundtrack ဖွဈပွီး နိုငျငံအတျောမြားမြားရဲ့ Top 20 စာရငျးထဲ ဝငျခဲ့ပါတယျ။ US မှာလညျး Billboard Hot 100 ထဲ ဝငျခဲ့တဲ့ သီခငျြးဖွဈပါတယျ။ “You could break my heart in two
But when it heals, it beats for you” ဆိုတဲ့ လှပတဲ့ စာသားနဲ့ I’d go back to you ဆိုတဲ့ အဖှဲ့လေးကို ကွိုကျကွမယျ ထငျပါတယျ။ Music Video ကို ခပျဆနျးဆနျးလေးရိုကျကူးတငျဆကျထားပွီး ၁၉၆၅ ခုနှဈက ပွငျသဈရုပျရှငျ ‘Pierrot le Fou’ ကနေ Inspiration ရယူထားတယျလို့ ဆိုတာမို့ ကွညျ့လိုကျပါဦး။
ဒီသီခငျြးကတော့ Rita Ora ရဲ့ အသဈထှကျရှိမယျ့ ဒုတိယမွောကျ Album ထဲမှာ ပါဝငျတဲ့ သီခငျြးဖွဈပါတယျ။ ဒီသီခငျြးကို ရေးသားသူတှထေဲမှာ Camila Cabello လညျး ပါဝငျပွီး ဒီသီခငျြးဟာ Charli XCX ရဲ့ သီခငျြး ‘Boys’ ရဲ့ နောကျဆကျတှဲသီခငျြးလို့ ယူဆလို့ ရပါတယျ။ သီခငျြးစာသားတှအေရ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ဆှဲဆောငျမှုနဲ့ လိငျတူလိငျကှဲ နှဈမြိုးလုံး နှဈသကျသဘောကမြှုကို ဖျောကြူးနပေါတယျ။ ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈ ဒီလိုနာမညျကွီး အမြိုးသမီးလေးယောကျရဲ့ သီခငျြးကို နားထောငျခငျြရငျတော့ ဒီမှာပါ။
Solo ကတော့ ထူးထူးခွားခွား Clean Bandit နဲ့ Demi Lovato တို့ တှဲဆိုထားတဲ့ သီခငျြး ဖွဈပါတယျ။ EDM နှယျတဲ့ သီခငျြးအမြိုးအစား ဖွဈပွီး အသညျးကှဲနတောတောငျမှ ကိုယျ့ဘာသာရုနျးကနျရပျတညျနတေဲ့အကွောငျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီသီခငျြးကတော့ လကျတငျအမရေိကပုံစံသီခငျြးဖွဈပွီး ရိုမေးနီးယားအဆိုတျော Andra က Pachanga နဲ့ တှဲပွီး သီဆိုထားပါတယျ။ ဒီလို သီခငျြးပုံစံတှေ ကွိုကျတဲ့သူတှေ အတှကျ ဒှနျ့လို့ ရအောငျ ကွညျ့လိုကျပါဦး။
ဒီသီခငျြးကတော့ အမရေိကနျအဆိုတျော Bazzi ရဲ့ သီခငျြးလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကောငျမလေး ဘယျလောကျမိုကျကွောငျးကို ရေးဖှဲ့ထားတဲ့ ဒီသီခငျြးလေးကိုလညျး မွညျးစမျးကွညျ့ပါဦး။
OneRepublic ရဲ့ သီခငျြးသဈဟာ နံပါတျ (၇) နရောမှာ ရပျတညျနပွေီး 13 Reasons Why Season2ရဲ့ Soundtrack လညျး ဖွဈတဲ့အတှကျ တဈခကျြလောကျ ကွညျ့လိုကျပါဦး။
Lil Pump ရဲ့ ဒီသီခငျြးကတော့ သူရဲ့ နောကျထှကျရှိလာမယျ့ Mixtape ‘Harvard Dropout’ ထဲက သီခငျြးဖွဈပါတယျ။ သီခငျြးစာသားတှကေတော့ Rapper တှေ ဆိုနကွေ ပုံစံမြိုးပဲ ဖွဈပွီး ငှအေပွညျ့သယျထားတဲ့ Truck Car နဲ့ Bling Bling တှနေဲ့ ရိုကျပွထားပါတယျ။
အခုတလော ရလေညျတှေ ပှငျ့ပွနတေဲ့ Troye Sivan လေးရဲ့ ‘Bloom’ ဖွဈပါတယျ။ I bloom just for you ဆိုတဲ့ စာသားတငျ ပွုံးခငျြစရာပါ။ ဒီသီခငျြးဟာ သူ့ရဲ့ ထှကျရှိမယျ့ ဒုတိယအခှမှော ပါဝငျမှာ ဖွဈပွီး Troye Sivan တဈယောကျရလေညျနုပွတဲ့ သီခငျြးဖွဈပါတယျ။
Don’t say you love me ကတော့ နားစှဲလှယျပွီး တကယျမခဈြပဲနဲ့ ခဈြတယျမပွောပါနဲ့ဆိုတဲ့ သဘောမြိုး ရေးဖှဲ့ထားပါတယျ။ Fifth Harmony ရဲ့ တတိယအခှထေဲမှာ ပါဝငျခဲ့ပွီး Pop နဲ့ Tropical House အမြိုးအစားသီခငျြးလေးလညျး ဖွဈပါတယျ။
အဆငျပွနေားစှဲနိုငျတဲ့ သီခငျြးမြားကို စုစညျးဖျောပွပေးထားလို့ ခံစားပြျောရှငျနိုငျကွမယျထငျပါတယျ။ Haveanice weekend!